Umugqa we-630mm PVC Pipe Extrusion eGibhithe
NgoMeyi, onjiniyela bakaGrace bafika eMfuleni iNile omuhle ukuzolungisa amaphutha futhi basebenzise imigqa emibili yokukhiqiza amapayipi e-PVC ayi-315-630mm. Ulayini wokukhiqiza uqukethe i-twin-screw extruder ephikisayo ejikelezayo, ibhokisi elinomshini, ibhokisi lokufafaza, ugandaganda, umshini wokusika, nomshini okhazimulayo; iyunithi ine-p ethembekile ...
Imboni Yezomsebenzi e-Iraq
Lokhu kungumsebenzi omkhulu woMnyango Wezimboni wase-Iraq. UMnu Manhal Aziz Al Khabaz, uNgqongqoshe woMnyango Wezezimboni Nezimbiwa e-Iraq, kanye no-Ahmed Hussain, uMqondisi we-SCCI bebehambele umcimbi wokuvulwa kwe-Grace Pipe Equipment. UDkt Hussein Muhammad Ali, umeluleki wezentuthuko weMi ...
I-logo entsha, isithombe esisha
I-GRACE isuselwa kuJiangsu China, futhi igcina intuthuko yomhlaba wonke ibhekile. Kugxilwe emkhakheni wokukhiqiza wemishini ye-extrusion epulasitiki, i-GRACE ngumhlinzeki wemishini ohlanganisa ukwakhiwa, i-R & D, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo. I-GRACE NEW LOGO inokuphakanyiswa kwenkazimulo, ukuvula i ...
Imishini yamukelwa ngempumelelo yiTotal
Muva nje, i-Extruder ye-TPE eyenziwe ngokwezifiso ye-TOTAL evela eFrance isebenza ngempumelelo. Ngesikhathi sokuhlolwa, abasebenzi abahlola banelisekile kakhulu ngekhwalithi yemishini, okwamanje, bancoma kakhulu isimo sengqondo somsebenzi esiqinile nesibucayi, ukusebenza kahle kwekhwalithi ephezulu, ikhono lobuchwepheshe o ...